‘आडम्बरी कुरा नगरी पार्टीको सहजीकरणलाई स्वीकार गरौं’ | सहकारी सञ्चार
२०७६ पुष १५
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सत्ताईसौं वार्षिक साधारण सभा आउन अव नौ दिन मात्र बाँकी छ । साधारण सभाले महासंघमा आगामी चार वर्षका लागि संचालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन गर्ने भएकाले अहिले यो विषय सहकारी वृत्तमा चर्चा र चासोको शिखरमा छ ।
महासंघको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा नेतृत्वका आकांक्षीहरुको व्यवस्तता पनि चुलिँदै गएको छ । यस्तै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ महासंघलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने तयारीमा रहनुभएका महासंघका लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटा पनि । २०५५ सालमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष भएदेखि निरन्तर यो अभियानमा लाग्नुभएका देवकोटा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ मा रहेको रुद्रमति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ मुलुकको सत्ता संचालन गरिरहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सहकारी सम्बन्ध संगठनका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ ।
प्रस्तुत छ उहाँसंग महासंघको निर्वाचन र उहाँको उम्मेदवारीको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
– महासंघलाई परिपक्व ढंगले संचालन गर्न, चुनौतीलाई सही तरिकाले समाधान गर्न र हासिल भएका उपलब्धिहरुको निरन्तरताका लागि धर्मदत्त देवकोटाको आवश्यकता छ भन्ने धेरै साथीहरुको सुझाव छ । त्यसैले मैले अनुकुलता मिल्यो भने अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्छु भनेर मन बनाएको हो । त्यसका लागि म मानसिकरुपमा तयार छु । जिम्मेवारी प्राप्त भयोभने सक्षमताका साथ पुरा गर्छु भनेर साथीहरुकोबीचमा विचार अभिव्यक्त गरिरहेको छु ।
– मुलुकभरिबाट ३ सय ३४ ओटा संघका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । अधिकांशसंग मेरो व्यक्तिगत चिनजान, परिचय र सम्बन्ध छ । मैले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु ।
पार्टीको स्वीकृति पाउनुभयो ?
म नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सहकारी सम्बन्ध संगठनको ईन्चार्ज पनि हुँ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो । म उम्मेदवार नै हो भनेर घोषणा गर्न मलाई पार्टीको औपचारिक निर्णय र निर्देशन पनि चाहिन्छ । म त्यसको प्रतिक्षामा छु । पार्टीका निकाय र नेताहरुसंग मैले हार्दिक अनुरोध गरेको छु ।म २०३७ सालदेखि पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता भएर निरन्तर देश र जनताका लागि खटिईरहेको छु । अहिले सम्म मैले सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन । विगत देखि पार्टीले दिएका हरेक जिम्मेवारी अनुशासित भएर खुरुखुरु गर्दै आएको छु । अहिले म पार्टीको औपचारिक अनुमतिको प्रतीक्षामा छु । सहकारीमा पार्टीले सहजीकरण गर्दै आएको छ । पार्टीसंग सम्बन्ध राख्न हुँदैन भनेर आडम्बरी कुरा गर्नेहरुलाई पनि पछि पार्टीले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्ता आडम्बरी कुरा नगरी पार्टीको सहजीकरणलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ ।
तपाईं अध्यक्ष हुनुभयो भने महासंघमा के परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ ?
सन्दर्भ व्याजदरको मुद्दामा महासंघले प्रारम्भिक सहकारीको भावनालाई बेवास्ता ग¥यो भन्ने गुनासो सुनियो । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था ऐनमा छ । सहकारी क्षेत्रमा वेथिति भयो भनेर सरकारले यसलाई मुख्य अजेण्डा बनाएर छलफल चलायो । त्यो स्वभाविक थियो । सरकारले अभियानका चार जना प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेको पहिलो घटना होला सहकारीमा । अभियानका प्रतिनिधिहरुले उचित प्रतिनिधित्व नगरेको र सहकारीकर्मीहरुको मर्म नबुझेकाले त्यस्तो निर्णय भएको हो ।
सहकारी क्षेत्रका मुख्य विषय सन्दर्भ व्याजदर नभएर ऐन संशोधन, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची लगायतका यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरु हुनुपर्दथ्यो । कतिपय सहकारीले मनपरी व्याज लिएकाले यो विषय आकर्षित त भएकै थियो । तर अरु विषयलाई छाडेर हतारमा सन्दर्भ व्याजदरको मात्र निर्णय गर्ने कुरा गलत थियो । सहकारीको पुँजी भनेको जनताको पुँजी हो । कसैले बाहिरबाट दिएको होईन । त्यसैले बचत र ऋणमा कति व्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा सहकारीले स्वायत्त ढंगले निर्णय गर्ने विषय हो । सरकारले ६ प्रतिशत स्पे्रड दर तोकेपछि सन्दर्भ व्याजदर आवश्यक छैन । सहकारीले यो स्पे्रड दरलाई कायम राखेर बैंक र अन्य सहकारी संस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी आफैंले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । केही सहकारीले यो सिद्धान्त पालना नगरी मनपरी व्याज लिएकाले सरकारले सन्दर्भ व्याजदर घोषणा गर्ने परिस्थिति बनेको हो ।
हाम्रा प्रतिनिधिहरुले त्यसको संवेदनशीलतमा बुझ्नुभएन । त्यही कारण काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर लगायतका ठाउँमा सहकारीकर्मीहरु सडकमा उत्रिनुभएको हो । त्यसपछि मैले लेखा समितिको तर्फबाट संचालक समितिको बैठकमा यो विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न लिखित सुझाव पेश गरेँ । संचालक समितिले अभियानको तर्फबाट सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना साथीहरुलाई राखेर एउटा समिति बनायो । यो समितिले सडकमा आन्दोलनरत साथीहरुको समितिसंग वार्ता ग¥यो । महासंघको संचालक समितिको बैठकले यो अलि असान्दर्भिक भएकाले विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गर्ने, त्यतिन्जेल यसलाई कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नवनाउने र सरकारसंग मिलेर पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय ग¥यो । र, यसको पत्र सहकारी विभागमा पनि पुगेको छ ।तर महासंघको नेतृत्व र त्यो समितिमा बस्ने साथीहरुले जे निर्णय भएको त्यसलाई इमान्दारिताकासाथ पालना नगरेकाले विवाद उत्पन्न भएको हो ।
दोश्रो पक्ष, महासंघले प्रारम्भिक सहकारीको भावना नबुझेको होईन । बुझेको छ । धेरै विषयहरु समाधान गर्न प्रयास पनि गरेको छ । कर लगायतका समस्याहरु समाधान पनि भएका छन् । राम्रो पक्षको प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्ने, उनीहरुको व्यवसायलाई सशक्तिकरण गर्ने र सिंगो अभियानलाई सशक्तिकरण गर्ने काममा कमि भएको होला । म अध्यक्ष भएँ भने ती कमिलाई पूर्ति गर्ने काम गर्नेछु । अव उत्पादन सहकारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आफ्ना सदस्यको चासोलाई केन्द्रमा राख्छौं । विधि, पद्धति र संगतिमा चलौं । झोलामा राखेर संघ÷संस्था चलाउने होईन व्यवसायिक बनाएर जानुपर्छ ।